Ngaba ukulungele ukukhulisa ukuthengisa kwakho nge-Instagram? | Martech Zone
Ngaba ukulungele ukukhulisa ukuthengisa kwakho nge-Instagram?
NgoLwesibini, Januwari 20, 2015 NgoMgqibelo, nge-4 kaFebruwari ngo-2017 Douglas Karr
Ndiya kuba ngowokuqala ukuvuma ukuba andibeki xesha lide kwiVini, kwi-Instagram kunye nokwabelana ngemifanekiso kumajelo asekuhlaleni. Ndiyafuna, kodwa kulula kakhulu ukubonelela ngencam ngombhalo kunokuba ubambe umzobo, uyilo oluthile, kwaye wabelane ngento enentsingiselo, kodwa ufumana itoni. Ndivalela ukuthatha Iifoto kunye nevidiyo yenja yam uGambino endaweni yoko… abalandeli bam bayabathanda abo!
Ndiyathemba ukutshintsha loo nto kulo nyaka. Ndifuna ukugxila kwizicwangciso zethu kwaye ndizilungelelanise kuzo zonke iindlela zethu zosasazo ngcono. Nokuba isebenzisa ikhamera yam ukuthatha umfanekiso womfanekiso webhlog endiwenzayo, ndiqinisekile ukuba unokufikelela ngakumbi kune-selfie… okanye i-doggie. Kwaye kufanelekile ngakumbi kwi-brand yethu kunye nomxholo esiwenza umsebenzi omkhulu kangako ngawo. Iingcebiso kule infographic ziya kunceda!
Abathengi banamhlanje basebenza ngombane ngokukhawuleza ukujonga ixesha ngamanye amaxesha ne-Facebook ayinako ukuqhubeka nayo. Kungenxa yoko le nto i-Instagram inyuka ngokuthandwa. Yintoni uninzi lwangaphambili olucinge njengendawo yokwabelana ngeefoto, ngoku isisxhobo esikhulu sentengiso kwimidiya yoluntu esinokudala iziphumo zangempela zohlobo lwakho. UIssa Asad
Ukuhamba ne-infographic, u-Issa Asad unikezela nge-ebook epheleleyo Inzuzo kwangoko nge-Instagram Khuphela ngoku simahla.
tags: ukuthengisa umfanekisoinstagramyokuthengisaUIssa Asadukuthengisa okubonakalayoWyzowl
Intengiso yedijithali kunye ne-SEO yeeBhendi neeMvumi
PHUMA ngaphambili & kwiziko (@EXITFrontCenter)
NgoJanuwari 21, 2015 ngo-2:50 PM
Enkosi, Douglas ngolwazi olukhulu lwe-infographic. Nam, andithumelanga kwindawo yethu ye-Instagram yenkampani njengoko bendifanele kwaye oku kufanele kuncede ukutsiba kum.